Sisele dengwane isaguga esixoshwe emzini wakubo e-Ashdown | Eyethu News
Sisele dengwane isaguga esixoshwe emzini wakubo e-Ashdown
“Ubuye esitolo izimpahla zakhe sezikemnyango.”
: Amalunga omphakathi abethukuthele egane unwabu abebuyisela ngenkani izimpahla zikagogo.Isithombe :Ntombizethu Ngcobo
USEPHENDUKE undingasithebeni owesifazane wase- Ashdown okhishwe endlini ayishiyelwa ngabazali bakhe abangasekho emhlabeni ngoba kuthiwa umuzi sewudayisiwe .
UNksz Busisiwe Ntshibe (75) ohlala nomzukulu oneminyaka engu- 37 uthe useneminyaka engu- 70 ahlala kulomuzi uhlangabezwe yizimpahla ngaphandle kocingo ngesikhathi evela esitolo.
“Lesigameko senzeke ngesikhathi ngingekho ngisaye esitolo ngezwa ngomunye umakhelwane ongitshele kuthi angiphuthume ekhaya kukhona okwenzekayo sekuze kwakhishwa nezimpahla. Ngesikhathi ngifika labantu bebehamba namaphoyisa kanye no- sheriff bafike bagqekeza bakhiphela yonke impahla ngaphandle kwesango bangitshela kuthi ngingabe ngisangena umuzi ududayisiwe,” kubeka uNksz Ntshibe.
Uqhube wathi labantu baqala ukumhlukumeza ngonyaka ka- 2012 wagqigqa izinkantolo kuqulwa lelilicala lokudayiswa komuzi kodwa bengafiki waze watshelwa umeli walomkhipha endlini ukuthi akayeke phansi ngoba labantu abazimisele ngokufika enkantolo.
“Ngibuhlungu kakhulu emoyeni ngoba abangazi njengamanje ngizolibangisaphi angisenamuva kanye nephambili. Akukho maphepha awubufakazi bokuthengwa kwendlu engitshengiswe wonke ngivele ngakhishwa nje. Bengicela ukubuyela ekhaya labantu bahlukane nalomuzi bangishiye ngokuthula. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi ngizodayiswa nangabantu bomthetho okuyibona okumele basivikele kodwa banesibindi sokuzongikhiphisa okwenja kithi,” kubeka uNksz Ntshibe ehlengezela izinyembezi.
Amalunga omphakathi abethukuthele egane unwabu azame ukubuyisela ngenkani izimpahla zalona wesifazane nokugcine sekubanjwana ngezikhwepha nabanikazi abasha bomuzi. “Iyasixaka kakhulu lento yamaphoyisa asesiteshini iPlessislaar asitshele ukuthi awahlangene wona naloludaba umphakathi nekhansela bazobona ukuthi benzenjani.
Sizozithathela umthetho ngezandla ngoba ibona abasinike igunya sifuna kubuyiselwe impahla kagogo makungashitsha izulu kufike imvula uzokwenzenjani njengamanje intambama ebsuku uzolala kuphi nendawo,” kuchaza elinye ilunga lomphakathi elingathandanga ukuthi igama lalo lidalulwe.
UNksz Busisiwe Ntshibe (75) ophenduke undingasithebeni ngesikhathi ekhishwa emzini wakubo kuthiwa sewudayisiwe . Isithombe :Ntombizethu Ngcobo
Ikhansela lakulewadi uBernard Dumisani Phungula kade ethintwa mayelana naloludaba uthe ubeseluziwile loludaba wathi kodwa inqubo yokususwa kwabantu (Eviction order) ngesenkantolo abekho bona ngaphezulu kwayo. “Sikhathazekile kakhulu ngesimo ugogo abhekene naso sesike salithinta Ihhovisi loMvikeli woMphakathi kanye no- Legal aid sizama izindlela zokuthi kutholakale isixazululo saloludaba. Sesike samthinta kumakhalekhukhwini umnikazi omusha wendlu simunxusa ukuba ahlalise ugogo okwesikhashana siyathemba ukuthi uzosizwa amuzwele,” kuchaza ukhansela Phungula.
Funda olunye udaba : Basale dengwane abagibeli bamabhasi ngenxa yesiteleka
Uqhube wathi abahambisani neze nokuhlukunyezwa kogogo nezingane bazoyithinta yonke imigudu efanele ukuze athole ukusizakala ugogo njengoba esephenduke undingasithebeni. Uphinde wanxusa noma abantu ukuthi balule isandla kulekelelwe ugogo akwazi ukuthola ikhaya. Uphethe ngokuthi ucabanga ukuthi zihanjwe zonke izigaba ezikemthethweni uma kukhona okungenziwanga ngendlela efanele bazokubika.
Sekushone 4 kuN3 ngaseMthulini